Xiisad cusub oo ka dhex qaraxday Somaliland iyo Jabuuti iyo DF oo qeyb ka ah | Caasimada Online
Home Warar Xiisad cusub oo ka dhex qaraxday Somaliland iyo Jabuuti iyo DF oo...
Xiisad cusub oo ka dhex qaraxday Somaliland iyo Jabuuti iyo DF oo qeyb ka ah
Hargeysa (Caasimada Online) ― Xukuumada Somaliland ee uu hogaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi ayaa markii u horeysay ka hadashay xadhig Internet oo magaciisu yahay DARRE oo dowladda Jabuuti shaacisay inay soo marineyso badda Berbera.
Somaliland ayaa si cad u sheegtay in dowladda Jabuuti ayna wax xiriir ah kala soo sameyn arrinta Xadhigaasi Internetka ee ay ugu magac dartay DARRE, kaasi oo la marin doona magaalooyinka Berbera, Muqdisho iyo Mombasa.
Wasiirka boosaha iyo isgaadhsiinta Somaliland oo arrintaasi wax laga weydiiyay ayaa sheegay in dowladda Jabuuti aysan wax dalab ah oo ku aadan xadhigaasi u soo gudbin, isagoona xusay in ogolaansho la’aan xarigaasi la soo marin doonin badda Berbera.
“Dowladda Jabuuti ilaa hadda nagalama soo xiriirin arrinta xadhiga Internetka ee Berbera, hadey dowladda jabuuti naga codsato waxa loo eegi doona xeerka, hadduu ogolaadana markaas baa la siin doona liisan ogolaanshiyo, laakiin ilaa hadda nagamay soo dalban” ayuu yiri Wasiirku.
Xukuumada Somaliland ayaa hore u siisay heshiis ogolaanshiyo dhanka xadhkaha Internet-ka ah Shirkada Somcable, midaasi oo loo ogolaaday muddo dhan shan iyo labaatan sanno, oo u ansixiyey Baarlamaanka Somaliland
Dowladda Jabuuti ayaa si rasmiya u shaacisay maalintii Isniintii xadhiga Internet-ka ee DARRE, kaasi oo ay Berbera qeyb ka tahay magaalooyinka la soo marinayo xarigaasi Internet.
Markabka xadhiga Internet-ka sida ayaa la sheegaya in uu usoo jiheystay badda Berbera, isaga oo aan wax ogolaanshiyo ah ka haysan xukuumada uu hogaamiyo Madaxweyne Biixi, midaasi oo xiisad cusub ka dhex abuuri karta Dowladda Jabuuti iyo Somaliland.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Dowladda Jabuuti ay ogolaanshiyo uga soo qaadatay xadhigaasi in badda Berbera la geeyo dowladda federaalka Soomaaliya, ee uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo.
Somaliland ayaa iyadu ku dooda inay tahay dal madax banaan, inkasta oo ay Beesha caalamka ka haysan aqoonsi buuxa, una arkaan maamul ka tirsan dowladda Soomaaliya, haddana inta badan waxay u dhaqantaa sidii dowlad madax banaan.
Xiisad cusub oo ka dhex qarxaysa Somaliland iyo Jabuuti kana qeyb tahay DF